भाइरल पत्रकार विराट अनुपमले दिए युवा नेतालाई सात सल्लाह - साइपाल खबर
बझाङ । चर्चित एवम् जुझारु पत्रकार विराट अनुपमले युवा नेताका लागि सित्तैमा सात सल्लाह फेसबुक स्ट्याटसमा सार्वजानिक गरेका छन् । पुर्वी नेपालको इटहरीमा बसेर पत्रकारिता गर्दै आएका उनी समसामयिक बिषयवस्तु, देश तथा विदेशका गतिविधिहरु, पत्रकारिता तथा राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्दै आएर प्रखर पत्रकार हुन् । लौ हेर्नुहोस्, जस्ताको तस्तै उहाँका सल्लाहहरु ।
१. मिडिया बिक्ने माल बेच्छ। बिक्ने माल भनेको तपाईंले बजारमा चलेको मुद्दामा चर्का भासण दिदा समाचार बनाउछ। यसो हुँदैमा तपाईंको सफलता आएको हुन्न। मिडियाले आफ्नो काम गरेको मात्रै हो। मिडियामा आउने सफल हुनु जस्तो लाग्छ भने तपाईले राजनीति बुझ्दा मिडियामा आउनेहरुमा अहिले कत्तिको राष्ट्रिय राजनीतिको हैसियत के छ आफै जानकारी राख्न सक्नुहुन्छ ।
२. पार्टी नेतालाई रिझाएर नेता हुन त दलालले नि सक्छ। तस्करले नि सक्छ। डनले नि सक्छन् । तर ग्रासरुट्समा जमेर आउने चै नेता हो । पार्टी नेता रिझाएर पाएको शक्तिले आफू उभिएको संगठन वा समितिको नेता हुनु पनि ग्रासरुट्स पुग्नु होइन। ग्रासरुट्स पुग्नु त्यो हो कि तपाईंको बारेमा गुटिय आलोचना गरेपनि तपाईं आफ्नो क्षेत्रमा सक्षम भएकोमा प्रश्न उठाउन नसक्नु हो । उदाहरणका लागि तपाईं विद्यार्थी नेता हो तर विद्यार्थी नेता भएकोले आफ्नो क्षेत्रका युनिभर्सिटीको जर्नल डिस्कोर्स देखि विद्यार्थी र शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन र ट्रेन्डमा तपाईं सहभागी र दक्ष जानकार हुनुन्न भने तपाईं विद्यार्थी नेता होइन। विद्यार्थी फाटमा राजनीति गर्न घुसेको एक तोरी सदस्य मात्रै हो। यो नियम मजदुर देखी वकिलसम्म हुँदै सबैमा लागू हुन्छ ।
३. नेपालमा राजनीति मात्रै हुन्न। भूराजनीति नि हुन्छ। नेपाल आफ्नो आम्दानीले मात्रै चल्न नसक्ने दक्षिण एसियाकै दोश्रो सबैभन्दा कंगाल देश हो । दक्षिण एसिया चै एसिया मात्रै होइन विश्वको सबैभन्दा कंगाल क्षेत्रमा एक हो। त्यसैले वैदेशिक अनुदान सहयोग लिन भारत चीन देखि युरोप अमेरिकी सहयोग अनिवार्य छ। तपाईंलाई नेपाली बाहेक अङ्ग्रेजी त लगभग अनिवार्य छ। हिन्दी र चिनियाँ जाने अझ तपाईंको राजनीति भविस्यलाई मात्रै होइन देशको कूटनीतिलाई नि फाइदा हुन्छ। सम्झनुस तपाईं ठूलो नेता भएर भारत, चीन र अङ्ग्रेजी बोल्ने देश पुग्दा त्यैको भाषामा भासण दिदा नेपाली स्तर कस्तो दामी होला ! भाषा माध्यम मात्रै त हो भन्ने भावुकताबाट माथि उठ्नुस। चीन देखि जापान जस्तो हैसियत भएको देशको नेता होइन तपाईं । तपाईंको कुरा जत्ती सजिलो र सिधा भन्ने अनि बुझाउने तपाईंको हैसियत हुन्छ उत्तिकै राम्रो नेता हो तपाईं ।
४. गुटमा नलागी नेपाली राजनीतिमा टिक्न सकिन्न। गुटमै लाग्नुस। तर, ५१% मात्रै लाग्नुस। ४९% चै पार्टीमा स्वतन्त्र भएर लाग्नुस। पार्टी हुँदा मात्रै नेता हुने हो। पार्टी हुँदा मात्रै गुट हुने हो।
५. अरु पार्टीका सिधाान्त बिचार र पुस्तक पनि अनिवार्य पढ्नुस। समय अनुकुल तारिफ र आलोचना दुवै गर्न राम्रो काम लाग्छ। पार्टी प्रशिक्षण र पत्रिकामार्फत मात्रै अन्य पार्टी बारेमा धारणा बनाउदा तपाईं एकोहोरो मात्रै होइन असक्षम हुनुहुन्छ ।
६. साथी सर्कल बनाउदा एकै जात धर्म क्षेत्र लिङ्ग र समुदायको नबनाउनु। सबैसग संगत हुनु र खाससग मात्रै हुनुको १८० डिग्री फरक हुन्छ। तपाईंको बृहत् जानकारी अनुभव र एक्पोजरको लागि दायरा फराकिलो हुनुपर्छ । यो फराकिलोको अर्थ तपाईंले सम्भव भएसम्म विभिन्न देशका साथीहरूसग नि जोडीनु हो। यसले तपाईंको टीम नि फराकिलो र शक्तिशाली बनाउछ। राम्रो टीम नहुँदा धेरै नेताले रिजल्ट दिन सकेनन् ।
७. अहिले नेपालमा विदेशीले भाउ दिदा सकेसम्म सबै भन्ने सुनाउने चलन छ। दूतावासले दिएको निम्तोलाई नोबेल पुरस्कार वा ओस्कार बिजय गरेको जस्तो सान देखाउने चलनबाट मुक्त हुनुस। विदेशीले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा काम गर्छन् । तपाईंकोमा होईन । तपाईंलाई प्रयोग मात्रै गर्छन् । विदेशीले बोकेको होइन जनताले बोकेको मात्र नेता हुन्छन् । दूतावाससग कुराकानी गर्दा पार्टी र देशको गलत कुरा नसुनाउनु। तपाईंले सुनाएको कुरा कुनै न कुनै बेला सार्वजनिक हुन्छ हुन्छ। पुर्व भारतीय राजदूत रे देखी विकिलक्सले सुचना चुहाउदा कत्तिको मकुन्डो खोलियो? अमेरिकाले त हरेक ५० वर्षमा गोप्य सूचना सार्वजनिक गर्छ। महेन्द्र देखि वीपीसम्मको लुज टक्स सार्वजनिक भएको छन् । त्यसैले विदेशी शक्तिलाई भाउ दिने, चाकरी गर्ने र नेपाली राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने कुरा नगर्दा राम्रो हो ।
१६ किलो चरेशसहित बझाङका दुई पक्राउ
भोजपुर ट्रेल रेसको उपाधि प्रियालार्इ
१३ फाल्गुन २०७५, सोमबार १९:३० साइपाल खबर
मुख्यमन्त्री शेरधन राईसंग सांसदकै असन्तुष्ति
२९ फाल्गुन २०७५, बुधबार १९:४४ साइपाल खबर
लाेप हुदै ‘दाम्नाई–देनाई’
१२ चैत्र २०७५, मंगलवार ०९:१० साइपाल खबर